सिमरा गोल्डकपको उपाधिका लागि थ्री स्टार र आर्मी भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ? | Hamro Khelkud
सिमरा गोल्डकपको उपाधिका लागि थ्री स्टार र आर्मी भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
सुनील गाउँले (सिमरा) – रुस्लान १०औं सिमरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि ‘ए’ डिभिजनका दुई क्लब त्रिभुवन आर्मी र रुस्लान थ्री स्टारबीच शनिवार सिमरा रंगशालामा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
फाइनल अघिको प्रि–म्याच पत्रकार सम्मेलनमा थ्री स्टार र आर्मीका कप्तान र प्रशिक्षक ट्रफीसाथ । तस्वीरः सुनिल गाँउले
दुई पटकको विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लबले रुस्लान थ्री स्टार क्लबसँग सिमरा रंशालामा दोस्रोपटक फाइनल खेल्दैछ । थ्री स्टारलाई हराउँदै आर्मीले गतवर्ष दोस्रोपटक सिमरा गोल्डकपको उपाधि जितेको थियो ।
२०७१ सालमा सम्पन्न छैठौं संस्करणको समेत विजेता रहेको आर्मी चौथोपटक सिमरा गोल्डकपको फाइनलमा पुगेको हो । आठौं संस्करणको फाइनलमा संकटा क्लबसँग पराजित हुँदै आर्मीले उपविजेताका रुपमा चित्त बुझाएको थियो ।
नव जनजागृति युवा क्लब सिमराको आयोजनामा १० वर्षदेखि बारा जिल्लामा निरन्तर आयोजना हुने यो एउटा मात्रै राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता हो । सिमरा गोल्डकपको इतिहाँसमा मनाङ–मस्र्याङ्दी क्लब र आर्मीले समान दुइ–दुइ पटक उपाधि उचालेका छन् । तर, लिग लगतै आयोजना भएकाले मनाङले यसवर्ष प्रतियोगितामा भाग लिएन ।
यसवर्ष आर्मी तेस्रो पटक उपाधि जित्दै प्रतियोगिताको सर्वाधिक सफल टोली बन्ने प्रयासमा मैदानमा उत्रने छ भने दोश्रोपटक फाईनल यात्रा तय गरेको थ्रिस्टार आर्मीसंग गत वर्षको हारको बदला लिंदै उपाधि विजेताको सूचिमा सामेल हुने दाउँमा छ ।
सिमरा गोल्डकपमा यो पटक २ खेल खेल्ने क्रममा अहिले सम्म गोल नखाएका थ्री स्टारका गोलकिपर एलन न्यौपानेको नाममा सर्वाधिक क्लिनसिट रहेको छ । आर्मीका टंक बस्नेत र थ्रीस्टारका फोफाना फोडे २–२ गोलका साथ सर्वाधिक गोलकर्ताको सुचीमा आगाडि छन् ।
शुक्रबार सिमरा रंगशालामा आयोजित प्रिम्याच कन्फ्रेन्समा दुबै टोलीका प्रशिक्षक र कप्तानले उपाधि जित्ने रणनीतिका साथ मैदानमा उत्रने बताए । आर्मीका तर्फबाट प्रशिक्षक नविन न्यौपाने र टिम म्यानेजर चुनबहादुर थापा तथा थ्री स्टारका प्रशिक्षक मेघराज केसी र कप्तान विक्रम लामा पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित थिए ।
आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले भने फाइनलका दुवै टोली राम्रो भएको कारण खेल ५०÷५० हुने बताए । न्यौपाने भन्छन, ‘जसले मौकाको सदुपयोग गर्न सक्छ उसले नै उपाधि जित्छ । फाइनल पुग्ने दुबै टिम सशक्त हुने भएकाले विशेष रणनीति र मेहनतको जरुरी पर्ने न्यौपानेले बताए ।
थ्री स्टारका प्रशिक्षक मेघराज केसीले लिगपछिको यस सिजनमा आँफूहरुले भाग लिएको २ वटा प्रतियोगिता मध्य दुबैमा फाइनल पुगेकाले टिमका खेलाडीमा उच्च मनोबल रहेको बताए ।
सिमरा गोल्डकपका हाल सम्मका विजेता र उपविजेता